मुख्य समाचार – tvNEPALI
स्थलगत अनुगमनमा आएको मोदीको...
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा वैशाख २८ र २९ आउने भएसँगै तयारी जुट्न थालेको छ । मोदी भारतबाट हेलिकोप्टर चढेर सोझै जनकपुर अवतरण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसका लागी स्थलगत अनुगमन हुन थालेको छ । मंगलबार...
सेनाको गाडीलाई ठक्कर दिँदा...
पथरी। नेपाली सेनाको गाडीलाई ठक्कर दिँदा धादिङमा ट्रक आगो लागेको छ । थाक्रे गाउँपालिका महादेवबेसी–२ पृथ्वी राजमार्गमा सेनाको गाडीलाई ठक्कर दिँदा सिमेन्ट बोकेको ना ६ ख २७८१ नम्बरको ट्रकमा आगलागी भएको हो। मलेखुबाट काठमाडौं आउँदै गरेको उक्त ट्रकले सोही दिशाबाट...
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद सचिवालयले अवकाश भइसकेको जानकारी गराएको छ । सचिव नृपध्वज निरौलले हस्ताक्षर गरी पराजुलीलाई बुझाएको पत्रमा २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भइसकेको जानकारी दिइएको छ । पत्रमा भनिएको छ, '...सम्माननीय महोदयको ६५ (पैसट्ठी) वर्षको उमेर...
प्रधानमन्त्री ओली पनि पुगे...
काठमाडौं-विमान दुर्घटनाको अबस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विमानस्थलमा पुगेका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा चालक दलका ४ सदस्यसहित ७१ जना सवार युएस बंगलाको एयर क्राफ्ट सोमबार दिउँसो अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । विमान दुर्घटनावारे जानकारी लिन गृहमन्त्री...
अवतरणको क्रममा बंगलादेशबाट काठमाण्डौ...
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा बंगलादेशबाट आएको विमान दुर्घटनामा परेको छ । रनवेमा चिप्लिएर विमान दुर्घटना भएको हो । जहाजको धावनमार्ग नजिकै जहाज दुर्घटनामा परेपछि ठुलो आगलागी भएको छ । विमान यूएस बंगलाको भएकाे बताइएकाे छ । अहिले उद्दार कार्य...
भयो पार्टी एकता –...
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई दलका नेताहरुले पार्टी एकताका सातबुँदे आधारमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति अवेर एमाले र माओवादीका नेताहरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एकतापछि...
केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त,सपथग्रहण...
३ फागुन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकि हुन् । प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण आजै दिउसो ४ बजे हुने भएको छ ।
देउवाद्वारा राजीनामाको घोषणा
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे लगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि...
को हुन संसार भर...
मौसम दाहाल मोरङ, नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले सामाजिक संजालहरुमा केहि न केहि भाइरल भईरहेको हुन्छ। केहि समय अघि पाकिस्तानका ‘चियावाला’ पनि एकाएक भाइरल भए। त्यसपछि नेपालकी कुसुम श्रेष्ठ ‘तरकारीवाली’ सामाजिक संजालमा भाइरल भइन। तरकारी बोकेर ल्याउदै गर्दा रुपचन महर्जनले...
दीपक मनाङ्गेलार्इ पाँच वर्ष...
मनाङ (ख) बाट चार नम्बर प्रदेशको प्रदेश सांसदमा निर्वाचित दीपक मनाङ्गेलाई सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुशोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार मनाङ्गेलाई ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजायको फैसला...
डा. गोविन्द केसीले तोडे...
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिबार बिहान अनशन तोडेका हुन् । काठमाडौं जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएका सिराहा जिल्लाको लाहनका नथुनिया मोचीको हातबाट जुस...